Madagascar - SMM Olona tokony mitsinjo ny mpitsara no hatao minisitra - Taratra 7 mars 2018 - Survivre à Madagascar dans le milieu des infrastructures télécom et réseaux CISCO
Accueil Corruption Madagascar Madagascar – SMM Olona tokony mitsinjo ny mpitsara no hatao minisitra –...
Madagascar – SMM Olona tokony mitsinjo ny mpitsara no hatao minisitra – Taratra 7 mars 2018
Nanano fanambarana ho an’ny mpanao gazety omaly ny sendikan’ny mpitsara malagasy (SMM) manoloana ny toe-draharaha mafampana, indrindra fa amin-dry zareo mpitsara. Nilaza ny SLL, tamin’ny alalan’ny filohany, Erinaivo Faniry, fa tokony olona mitsinjo marina ny tombotsoan’ny mpitsara no tendrena ministra. « Ny olona efa akaiky hisotro ronono, tsy mitsinjo ny tombotsoa iraisan’ny mpitsara. Ekenay ihany koa fa tokony hitovy avokoa ny mpitsara rehetra eo amin’ny fampanajana lalàna sy lafiny fanenjehana, saingytokony mba hajaina ny fepetra mifanaraka amin’nyizany », hoy ny fanazavana.
Mitaky ny fanaovana fanadihadiana lalina momba ny « Raharaha Houcine Arfa » koa izy ireo ka tokony ho fanadihadiana mahaleo tena izany fa tsy ny ao amin’ny ministera ihany no hanao izany.
Ity resaka farany izay nilazan’ny avy amin’ny ministeran’ny fitsarana ka hita fa tsy marina ny filazan’i Houcine Arfa fa nandray volabe taminy izy. Ny Bianco anefa, etsy andaniny, vao hanao fanadihadiana ity ministra ity. Andrasana ny tohin’ny raharaha.
Article précédentMadagascar – Gidragidra manodidina ny minisitry ny Fitsarana – Express Madagascar du 6 mars 2013
Article suivantMadagascar – Raharaha Houcine Arfa Hanadihady ny minisitry ny Fitsarana ny Bianco Taratra 7 mars 2018